Qadaadiic Falls leedahay koox quduuska taageero inay ka jawaabaan wixii su'aalo la xidhiidha in aad xisaabta. You can call us at:
Taleefanka: 020 3700 0991
Waxa kale oo aad email u diri kartaa noo leedahay taageero roon weydiimo aad.
Fadlan ku dar magacaaga iyo lambarka diiwaan-mobile ee warqadihiisa. Ogsoonow in wax isgaarsiinta email aan la aamin. HA ka mid ah lambarkaaga PIN ama lambarka kaarkaaga deynta ee email kasta kuu soo diri.
Haddii aad rabto in aad warqad noogu soo, faahfaahinta xiriirka yihiin: